Mahatratra 1.600 isan-taona hatreto ireo marary tonga mitsabo tena eny anivon’ireo hopitaly misy eto Madagasikara raha 18.400 isan-taona vinavina nikajian’ny sampandraharaha iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana azy na ny OMS. Ireo tratry ny homamiadan’ny vozon’ny tranonjaza, ny homamiadan’ny nono, ny homamiadan’ny ra no tena betsaka indrindra izay tsy hanavahana sokajin-taona intsony. Nankalazaina omaly talata 04 febroary ny andro maneran-tany iadiana amin’ny homamiadana. Lohahevitra noraisina y hoe : fantatro ny tenako, ary fantatro ny tokony hataoko na koa ny hoe : handray fanapahan-kevitra mifandraika amin’izany aho, lohahevitra noraisina nanomboka tamin’ny taona 2019 ka hatramin’ny 2021. Tsiahivina moa fa miompana sy mifantoka amin’ny fampiasam-batana ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena iadiana amin’ny homamiadana amin’ity taona ity. Anisan’ny fomba iray hahafahana manohitra karazan’aretina maro mantsy ny fampiasam-batana.